Munaasabadda Caleema Saarka Baarlamaanka Maamulka Jubba Oo Kismaayo Ka Socota – Radio Muqdisho
Munaasabadda caleemo-saarka baarlamaanka maamulka Jubbaland ee dhawaan la dhisay ayaa magaalada Kismaayo ka socota, iyadoo ay ka qeyb galayaan Wufuud kale duwan ee maanta gaaray halkaasi oo uu ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Munaasabadda oo jawi qurux badan ku socota ayaa waxaa soconaya khudbadaha ay jeedinayaan xubnaha ka qeyb galaya munaasabadaasi oo ah mid lagu caleema saarayo Baarlamaanka Maamulka Juba.
Mas’uuliyiinta khudbadaha ka jeediyay kulanka ayaa waxaa ka mid ah Wasiirada arrimaha dibadda Dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo muujiyay sida ay ugu faraxsanyihiin in la soo dhiso Baarlamaan uu yeesho maamulka Jubba.
Madaxweynaha Maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo munaasabadda khudbad ka jeedinaya ayaa ka sheekeynaya marxaladihii uu soo maray soo dhisida Baarlamaankani cusub ee maamulkaasi yeelanayo, waxaana uu u mahadceliyay madaxda munaasabadaasi ka qeyb gashay.
Munaasabadda oo socota wixii warar ah ee ku soo kordha waan idiin la socodsiin doonaa Insha’allah.